Ogaden News Agency (ONA) – Amaanka Magaalooyinka Waa Wayn Ee Itoobiya oo La Adkeeyay.
Amaanka Magaalooyinka Waa Wayn Ee Itoobiya oo La Adkeeyay.
Waxaa baadhitaan xoog badan xalay ilaa maanta uu ka socdaa qaar kamida magaalooyinka waawayn ee Itoobiya waxaana kamida meelaha uu baadhitaanka adag ka socdo magaalada Addiss Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya.
Waxaa kale oo ayagana ay baadhitaano ka socdaan magaalooyinka Shashamane, Mooyaale iyo Awasa baadhitaanka ayaa waxaa lagu macneeyay in kooxda argagixisada ah ee TPLF laga yaabo inay amaanka khal khal galiyaan ayagoo laga cabsi qabo inay bam gacmeedyo ku tuuraan meelaha qaar.
Arintan ayaa waxay kusoo aadaysaa xili uu maanta imaanayo magaalada Addiss Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya madaxwaynaha wadanka Eritrea Asias Afwerki taas kooxda TPLF iyo guud ahaanba dadka tigraygu aysan raali ka ahayn.
Kooxda TPLF oo aad uga soo horjeeda nabad dhex marta Itoobiya iyo Eritrea ayaa waxay isku dayaysaa inay amaanka guud ahaan ay khal khal galiso ayadoo kusoo beegaysa booqashada madaxwaynaha wadanka Eritrea.